Izindaba - IChampion Thread yethula umugqa weRenu wemicu yokuthunga esetshenzisiwe kabusha engu-100%
Ikomkhulu layo eliseGastonia, iChampion Thread Company (CTC), umhlinzeki womhlaba wonke wentambo, intambo, kanye nezinto ezahlukahlukene zemikhiqizo ethungiwe, yethule umugqa weRenu wazo zonke izintambo ezizungezile, zemvelo zezimboni zokuthunga ezenziwe ngokuphelele ezintweni ezingezona ezentombi. Imicu engu-100 yamapayipi esetshenzisiwe inikela ngenketho eluhlaza ngaphandle kokudela ukusebenza kokuthunga.
IRenu njengamanje iqukethe izinguqulo ezinobungani bemvelo bezintambo ezintathu ze-polyester ezizungeze zonke ezinokusetshenziswa okubanzi kuyo yonke imfashini, ifenisha, umatilasi, i-PPE, izimboni nezinye izingxenye zomkhiqizo.
"Siyaziqhenya ngokunikeza lezi zixazululo zezintambo ezizinzile," kusho umongameli we-CTC uMatt Poovey. “Ulayini wakwaRenu ukhuluma ngezimboni ezikhulayo kanye nesidingo sabathengi semikhiqizo eyenziwe ngezinto ezingezona ezezintombi nto. Le micu engu-100 yamapayipi esetshenziswe kabusha yakhelwe ukunika amandla abathengisi, ama-brand, nabakhiqizi ukuba bakwazi ukufeza izinhloso zabo zokubambelela kanye nokuzibophezela kwabo ngenkathi kugcinwa umkhiqizo, ukusebenza komthungo, ukungagudluki, kanye nezimpawu zokumelana namakhemikhali abazijabulelayo ezinyathelweni zethu zendabuko ze-polyester. ”
Iqinisekiswe ukuthi ayinazo izinto eziyingozi ngaphansi kwe-Oeko-Tex Standard 100, umugqa wamanje wemikhiqizo ezungeze eco-friendly ihlanganisa iRenu ChampSpun esetshenzisiwe kabusha okuyisisekelo sokuphotha intambo ye-polyester, i-Renu Poly ChampCore eyenziwe ngentambo esongwe kabusha nge-polyester ngentambo ye-multifilament, kanye nentambo ye-polyester eyenziwe kabusha ye-Renu AeroTex Plus. Imikhiqizo yeRenu ifaka isandla emnothweni oyindilinga ngokunciphisa ukusetshenziswa kwamandla, imfucuza nokuncika kukawoyela. Zenzelwe amazinga eseqophelweni eliphezulu e-CTC futhi seziqedile ngezithambisi zazo zokuphathelene ukuqinisekisa umkhiqizo omkhulu.
Imikhiqizo yakwaRenu imele ukuzibophezela kwe-CTC 'Ekuthuthukiseni i-Common Thread'.
Kusukela ngo-1979, iChampion Thread Company (CTC) igxile ezintanjeni zayo ezintsha zokuthunga, imicu eyenziwe ngobunjiniyela, izinto ezisikiwe, kanye nobuchwepheshe bemboni obungenakuqhathaniswa ukusiza izindwangu zomhlaba, izembatho zokuvikela, impahla yasendlini, izimoto, ezolimo, izimboni nabanye abenzi ukuxazulula umkhiqizo wabo, ukukhiqizwa, kanye nezinselelo zokuthengwa kwempahla.
Ekomkhulu layo eliseGastonia, eNorth Carolina, ibhizinisi eliphethwe ngumndeni futhi eliqhutshwa lizinikele ekuhlinzekeni imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamanani okuncintisana futhi lizihlukanisa ngokwethula ukwesekwa kwamakhasimende okungenakuqhathaniswa nokusebenzisana kwamakhasimende.